Loo baahan yahay: Caymiska caafimaadka ee booqdayaasha Midowga Yurub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Andorra Breaking News » Loo baahan yahay: Caymiska caafimaadka ee booqdayaasha Midowga Yurub
Andorra Breaking News • Wararka Dalka Austria • Belgium War Deg Deg Ah • Bulgaria War Deg Deg Ah • Croatia News Breaking News • Czechia Breaking News • Denmark War Deg Deg Ah • Finland War Cusub • France Breaking News • Jarmalka Jebinta Wararka • Hangari News • Italy War Deg Deg Ah • Liechtenstein Breaking News • Luxembourg Breaking News • Wararka Jabhada Malta • Monaco War Deg Deg Ah • Wararka Nederland • News • Wararka Norway • Booland News • Slovenia Breaking News • Switzerland War Deg Deg Ah • Dalxiiska
Waxaa laga yaabaa 25, 2017
Miyaad tahay muwaadin u dhashay dal Midowga Yurub uu u baahan yahay inuu haysto fiiso aad ku soo gasho? Fiisooyinka ayaa looga baahan yahay muwaadiniinta noocaas ah sidoo kale haddii ay degan yihiin waddamo sida Mareykanka ama Kanada. Miyaad tahay muwaadin wadan kasta oo ka baxsan Yurub oo qorsheynaya inaad sii joogtid Yurub si aad shaqo ama firaaqo u hesho?
Haddii jawaabtaadu haa tahay waad xasuusan kartaa Obama Care ama daryeel caafimaad oo dhammaan ah. Yurub gudaheeda, muwaadiniinta oo keliya uma baahna caymiska caafimaadka, laakiin sidoo kale booqdayaasha. Ka reebitaanku waa booqashooyinka waqtiga gaaban ee muwaadiniinta ee soo gali kara Midowga Yurub fiiso la’aan. Si qunsuliyaduhu u soo saaraan fiiso ku habboon gobolka Schengen, caddayn caymis caafimaad ayaa lagama maarmaan ah.
Si qunsuliyadaha waddamada Midowga Yurub ay u soo saaraan fiiso ku habboon gobolka Schengen, waxaa lagama maarmaan ah caddeynta caynsanaanta caafimaadka.
Maxaad ubaahantahay inaad ogaato markaad iibsaneyso caymiska.
Caymiska waa inuu ka jiraa dhammaan waddamada EU iyo Schengen
Caymisku waa inuu daboolaa muddada aad ku sugan tahay oo dhan, xitaa haddii uu yahay tarjumaad
Xaddiga ugu yar ee caymiskaagu waa inuu noqdaa EIRP 30,000.00
Waddan kasta oo ka tirsan EU wuxuu kaloo leeyahay sharciyo gaar ah oo qaran oo ay tahay inaad iska hubiso
Tusaale ahaan, Jarmalka, caymiskaagu waa inuu daboolaa 100% dhammaan kharashyada isbitaalka, iyadoon loo eegin haddii aad qaadatay nidaam bukaan-socod ama loo oggolaaday. Tani waa inay kujirtaa haddii ay tahay inaad ku aragto takhasusle. Kharashka jeebka ee caymis kasta kama badnaan karo 5,000 Euro.
Haddii ay dhacdo inaadan u baahnayn fiiso marka ugu horreysa ee aad soo gasho waddanka aad u socoto, waxaad u baahan tahay inaad keento caddeyn caymis 31kii maalmood ee ugu dambeeyay ee aad timid ka dib. Maamulada si wanaagsan ayaa loo tababaray si ay u hubiyaan tan. Diblomaasiyiinta waa laga dhaafay.
Way fududahay oo dhakhso badan tahay inaad iibsato caymiskaas.
Khubarada waxay kugula talinayaan laxiriirida caymiska sida BDAE Gruppe, maadaama kooxdani ay sannado khibrad u leedahay arimahan.
Macno ayey samaynaysaa waxaana laga yaabaa in looga baahdo dadka aan u dhalan Midowga Yurub inay sidoo kale hubiyaan xubnaha qoyska sidoo kale. Maalmahan daryeelka caafimaad wuxuu noqon karaa mid aad qaali u ah.
Booqashada Exat Booqo, tusaale ahaan, waxay bixinaysaa caymis buuxa oo keliya EUR 1.10 maalintii.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Caymiska caafimaadka ee shisheeyaha Jarmalka jooga .